USolwazi Albert Modi.
USolwazi Albert Modi, iPhini leSekela-Shansela lase-Kolishi LezoLimo, EzobuNjiniyela NezeSayensi, usanda kuba sethimbeni esithangamini sokuxhumana ngobuchwepheshe i-webinar ngobuhle bokudla ukudla kwesintu.
I-webinar ethi 101 reasons to eat local yethulwe yi-VKB nomthombo wezindaba i-Food For Mzansi njengengxenye yochungechunge i-Power Talk, ivame ukuba senyuvesi kodwa manje isiyenziwelwa ezinkundleni zokuxhumana ngenxa yobhubhane i-COVID-19.
Umethuli uNks Dawn Noemdoe ubenoModi, umpheki ovelele nombhali wezincwadi zokupheka uNks Nompumelelo Mqwebu, umcwaningi wase-Institute for Rural Development and Community Engagement eMangosuthu University of Technology uMnu uQinisani Qwabe nomcwaningi wezemifino uDkt Willem Jansen van Rensburg wase-Agricultural Research Council (e-ARC).
‘Sekucacile ukuthi ubhubhane i-COVID-19 lwenze ukuthi kuqikelelwe indlela okudliwayo ngayo,’ kusho u-Noemdoe. ‘Abantu baseNingizimu Afrika bazama ukubheka iqhaza labo ezisombululweni zokuthi kube nokudla.’
Ithimba lengxoxo ligcizelela isidingo sokuthi kuyekwe umqondo wokuthi ukudla kwesintu ‘ngukudla kwabantu abahluphekayo’, labalula izinhlobo zokudla kwesintu eziningi ezibizwa ngaleli gama kanjalo nobumqoka ngokomnotho, okwesiko nokomvelo.
UModi, ongungoti wezolimo ngokuqeqeshwa nowenza ucwaningo oluningi ekusetshenzisweni kwezitshalo zesintu, ugcizelele ukuthi kufakwe lezi zitshalo kwisilabhasi.
‘Kufanele singasiyeki isimo sezemvelo lapho zitholakala khona lezi zitshalo zesintu ukuze sibuze imibuzo emqoka ngendlala nobubha, ukusweleka kokudla, isimo sokuguquka kwezulu ne-COVID-19 imbala,’ kusho yena.
UModi uphakamise ukuthi uma lezi zitshalo nezindlela zolwazi lwesintu ezixhumene nazo zingangena ezindleleni zemfundo engenabukoloni, abacwaningi nongoti bangakhiqiza ulwazi lwase-Afrika olungaba wusizo olwazini lomhlaba wonke, bagcine ulwazi ngazo. Ugcizelele isidingo sezindlela zesayensi nezemfundo ukweseka abalimi abancane ekulimeni nasekuphuculeni impilo yabo.
UModi ubonge i-UKZN nabanye abaxhasa ucwaningo njenge-National Research Foundation, i-Water Research Commission (i-WRC), i-South African National Biodiversity Institute neminyango kahulumeni kazwelonke neyasekhaya ne-ARC ngosizo lwabo ekumxhaseni eminyakeni edlule, waphinde wedlulisa ukubonga kubantu besifazane basemakhaya asake wasebenzisana nabo ocwaningweni lwakhe.
Okukhulu, i-WRC ixhase imisebenzi emikhulu* ngezitshalo zesintu kusukela ngowezi-2007. Umsebenzi omusha ogxile ezitshalweni zezimpande neziqu, nawo oxhaswe yi-WRC,uqale ngoMbasa kulo nyaka.
U-van Rensburg, owenza iziqu zobudokotela kwezezitshalo e-UKZN, wenabe ngezinto ezingenziwa yizitshalo zesintu kwezomnotho nezinselelo eziphathelene nokukhiqiza lezi zitshalo, ikakhulukazi ukukhangiswa kwazo, nesidingo sokugcina umlando wolwazi lwesintu.
UQwabe ubalule ubumqoka bezenhlalo nezomnotho bokutshala izithombe zesintu nemfuyo yesintu eNingizimu Afrika, wathi loku kudla kwehlukile emphakathini futhi buchaza ubunjalo nesithunzi kubantu bomdabu. Ubalule neqhaza elimqoka okunakho ezinhlelweni zezolimo nesidingo senqubo yokuvikela lezi zithombo.
UMqwebu ukhulume ngobumqoka bemboni yezolimo ekuthuthukiseni ukudla kwesintu nentshisekelo yakhe ngokufakwa kokudla kwesintu embonini yokudla.
Ithimba libalule izinto ezinhle ngokudla kwesintu, kusukela ebuhleni bazo ngokomsoco kuye ekongeni uma kutshalwa, ubuhle bazo kulabo abakudlayo, umnotho nemvelo.
Amagama nesithombe: ngu-Christine Cuénod